I-American Standard Valve, iValve esemgangathweni yaseRussia-Kaibo
American Valve eqhelekileyo
I-Valve esemgangathweni yaseRussia
I-Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD iimveliso eziphambili zibandakanya i-American kunye ne-Russian standard standard valves, valves gloves, check valves, ball valves kunye nezinye iintlobo ze-valve, sinemigca yemveliso engaphezulu kwe-100 kwaye phantse iimodeli ezili-1000 ezahlukeneyo.
Iindlela Valve Ngaba Partner
Nawe Onke Amanyathelo Endlela.
Iimveliso eziphambili zibandakanya i-American ne-Russian standard valves zamasango, iigloves zeglobe, iivalves zokujonga, iivalves zebhola kunye nezinye iintlobo ze-valve,
API Wotho Gear Globe Valve
Ukusetyenziswa kweMveliso Ukuvula ...
Ingcinezelo High Flanged Gate Valve
Uyilo kunye neManufa ...
PN-MPa) izindlu Te ...
Globe Valve, iziphelo esisangqa
Uyilo ASME B16.34 ...
Isango Valve, esisangqa Iphela
Uyilo lwe-API 600; i-API 603 ...
I-Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd. yindawo edumileyo "kwisixeko se-valve yaseChina" -Isithili saseLongwan sePhondo laseZhejiang.Inkampani yethu ibandakanyeka kuyilo lwemveliso yevalve kunye nemveliso iminyaka emininzi kwaye amava aqokelelweyo asemasimini. Sele imisele igama elihle njengomvelisi wevalve kwaye unefuthe elihle kwintengiso yevalufa.
Umsebenzi we-valve yokukhangela kukuqinisekisa ukuba iphakathi kwindlela yokuhamba kombhobho ngaphandle kokuhamba kwakhona
Jonga ivalve, ekwabizwa ngokuba yivelufa yokutshekisha, ivelufa yokuhamba, ukujonga ivalve okanye ukujonga ivalve, indima yayo kukuqinisekisa ukuba umjelo wokuhamba kombhobho ngaphandle kokuhamba kwakhona. Ukuvulwa kunye nokuvalwa kwevalve yokutshekisha kuxhomekeke kumandla okuhamba kwaphakathi ukuvula nokuvala. Jonga ivalve yey ...
Zithini iiglavu zentsimbi ezitywinwe ngentsimbi ezahlulwe zangokwefom yejelo lesiteshi?
Isiginki esitywiniweyo sentsimbi 1. Ithe nkqo kwivelufu yeglobhu U “ngqo” ngevalufa yeglobhu ethe tye kungenxa yokuba isiphelo sayo sokudibanisa sikwi-axis, kodwa ijelo layo elinamanzi alikho "ngokuthe ngqo", kodwa libubudenge. Ukuhamba kufuneka kujike i-90 ° ukuze kudlule ...